I-Polyquaterniums Abakhiqizi Nabahlinzeki - I-China Polyquaterniums Factory
I-Polyquaternium-1 iyisilondolozi esiphephile kakhulu, esibonisa ubuthi obunamandla obuphansi kakhulu kumagundane.I-Polyquaternium-1 inobuthi kancane ngomlomo (i-LD50> 4.47 ml/l ku-40% esebenzayo kumagundane). I-Polyquaternium-1 ayicasuli esikhumbeni ngo-40%. Umkhiqizo awusona isivikeli sesikhumba futhi awuyona i-mutagenic.
I-Polyquaternium-6 iyi-polymer ye-dimethyl diallyl ammonium chloride. I-Polyquaternium-6 kulula ukuyincibilika emanzini futhi akulula ukuyishisa, ine-coagulated dint enamandla kanye nokuzinza kwesisombululo samanzi. I-Polyquaternium-6 izinzile ku-pH ebanzi. Inekhono elihle le-anti-chlorine kanye nokushaja okuphezulu. Lesi sici senza i-Polyquaternium-6 ibe umkhiqizo ofanele emikhiqizweni yokunakekelwa kwezinwele kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba. Ekwakheni ukunakekelwa komuntu siqu, i-Polyquaternium-6 isebenza njenge-anti-static agent, ifilimu yangaphambili kanye nokulungiswa kwezinwele.
I-Polyquaternium-7 iyinhlanganisela ye-quaternary ammonium esetshenziswa njenge-ejenti ye-antistatic, i-fim yangaphambili neyokulungisa izinwele, kuzimonyo nemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu, i-athomu ye-quaternary nitrogen ku-Polyquaternium-7 ihlale ithwala i-cationic kungakhathaliseki ukuthi i-pH yesistimu. , ukuba khona kwamaqembu e-hydroxyl kungase kunciphise ukuncibilika kwamanzi ngokuvamile okuphezulu kwe-quaternary ammonium compounds.Inkokhelo enhle kumaquats iwadonsela kumaprotheni esikhumba nezinwele ezigcwele kabi.I-Polyquaternium-7 ivimbela noma ivimbele ukunqwabelana kukagesi omile futhi yome yakha i-coating encane edonswa ku-shaft yezinwele. I-Polyquaternium-7 nayo isiza izinwele ukuba zibambe isitayela sazo ngokuvimbela ikhono lezinwele lokumunca umswakama.
I-Polyquaternium-10 iwuhlobo lwe-cationic hydroxyethyl cellulose. Le polymer inokunyibilika okuhle kakhulu, amandla okwenza isimo, i-adsorption kanye nekhono lokulungisa izinwele nesikhumba. Ngesakhiwo sayo se-polymer esiqondile esinamashaji avumayo eceleni komgogodla, i-Polyquaternium-10 iyi-conditioner ethambile ehambisana nezinhlobo ezahlukene zama-surfactants. Ikhono eliyingqayizivele lokulungisa ama-protein substrates awonakele enza i-Polyquaternium-10 ingasetshenziswa kabanzi ekunakekelweni kwezinwele, ukwenza isitayela sezinwele, ukuhlanza ubuso, ukugeza umzimba nezinkambu zokunakekelwa kwesikhumba. Namuhla, i-Polyquaternium-10 isaphathwa njenge-polymer ye-cationic conditioner ethandwa kakhulu phakathi kwayo yonke imindeni ye-polyquaternium.
I-Polyquaternium-11 iyi-quaternized copolymer ye-vinylpyrrolidone ne-dimethyl aminoethylmethacrylate,
isebenza njenge-ejenti yokulungisa, yokwenza ifilimu kanye ne-conditioning. Inikeza ukuthambisa okuhle kakhulu ezinweleni ezimanzi kanye nokukanywa kalula nokuncibilika ezinweleni ezomile. Yakha amafilimu acacile, angena-tacky, aqhubekayo futhi isiza ukwakha umzimba ezinweleni ngenkathi ishiya ilawuleka. Ithuthukisa ukuzwa kwesikhumba, inikeza ubushelelezi ngesikhathi sokufaka isicelo kanye nokulungiswa kwesikhumba. I-Polyquaternium-11 iphakanyiswa ukuthi isetshenziswe kuma-mousses, amajeli, izifutho zesitayela , izitayela ezintsha, ama-lotion ashiya endaweni, ukunakekelwa komzimba, izimonyo zombala, nezinhlelo zokusebenza zokunakekela ubuso.
I-Polyquaternium-22 iyi-Copolymer ye-dimethyldiallyl ammonium chloride ne-acrylic acid.
I-Polyquaternium-22 iyi-cationic co-polymer ekhokhiswa kakhulu ekwazi ukubonisa kokubili izici ze-anionic kanye ne-cationic.Le-co-polymer ibonisa ukuzinza okuhle kakhulu kwe-pH futhi ilungele ukusetshenziswa njengama-polymers afaka isimo emikhiqizo yezinwele nesikhumba.Ama-copolymers anconywa ukuthi ngcono izindawo ezimanzi nezomile zemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele, kanye nokuthuthukisa umuzwa emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba.
I-Polyquaternium-22 inikela ngokushelela, ukuthambisa nokunotha ekwakheni. Ithuthukisa ukuhlangana okumanzi ekwakhekeni kwe-shampoo futhi iphinde ithuthukise ukuphathwa kahle kwezinwele. Inikeza isikhumba ukuzwa okubushelelezi, okuthambile futhi inikeza ukuswakama okuhle kakhulu. Ibonisa umuzwa omuhle kakhulu wesikhumba sangemva kokugeza futhi inciphisa ukucinana ngemva kokoma kwesikhumba. Imikhiqizo yegwebu lokugeza ithola igwebu elicebile ngokuzinza okuthuthukisiwe.
I-Polyquaternium-22 isetshenziswa kuma-shampoos, ama-conditioner, ama-bleach, odayi bezinwele, amaza angapheli, imikhiqizo yesitayela, okhilimu abathambisayo, izinto zokuthambisa, imikhiqizo yokugeza, imikhiqizo yokushefa nensipho.
I-Polyquaternium-28 yakha amafilimu acacile, acwebezelayo aguquguqukayo futhi angenawo ama-tack. Iyancibilika emanzini, izinzile ku-hydrolysis ku-pH ephansi noma ephezulu (3-12), futhi iyahambisana nama-anionic surfactants, kanye ne-nonionic ne-amphoteric. Imvelo yayo ye-cationic inika ukuqina ezinweleni nasesikhunjeni, ihlinzeka ngesimo futhi ilawuleke ngokwakheka okuncane. I-Polyquaternium-28 ithuthukisa ukusebenzisana okumanzi kwezinwele futhi inokugcinwa kokusebenza okuhle kwama-curl emikhiqizweni yesitayela.
I-Polyquaternium 39 iyi-polymer ewuketshezi ehambisana nama-anionic kanye nama-amphoteric surfactants. Uma isetshenziswa emikhiqizweni yokunakekelwa kwezinwele uma inikela ngokukhazimula nokuzwakala okuthambile, okusilika. Izohlinzeka nge-sheen lapho izinwele zomile futhi izonciphisa i-static. Ihlinzeka ngokuswakama okuhle kakhulu futhi yengeza ukuzinza okuthuthukisiwe kugwebu elicebile, elijiyile lemikhiqizo yokuhlanza.
I-Polyquaternium-47 iyisisombululo esinamanzi se-amphoteric terpolymer ehlanganisa i-acrylic acid, i-methacrylamidopropyl trimethyl ammonium chloride ne-methyl acrylate. Ihambisana nama-anionic amaningi kanye nama-amphoteric surfactants. Emikhiqizweni yokunakekelwa kwezinwele, ihlinzeka nge-conditioning, i-detangling, imanzi inciphisa ukucinana ngemva kokumisa isikhumba. Inikeza umswakama omuhle kakhulu kanye nokuthambisa. Imikhiqizo yokuhlanza uketshezi ithola igwebu elicebile, elijiyile ngokuzinza okuthuthukisiwe. Iqukethe i-sodium benzoate njengesilondolozi.
I-Polyquaternium-51 iyi-copolymer ehambisana ne-biocompatible enesakhiwo esifanayo nesithako esibalulekile se-membrane yeseli, i-phospholipid. Kuyi-moisturizer enhle yesikhumba, ishiya umuzwa osilika, obushelelezi esikhumbeni futhi ingasiza ekwehliseni ukucasuka okubangelwa izithako ezingezinhle kangako.